The true is true in the world. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » The true is true in the world.
The true is true in the world.
Posted by နေ ဘုန်းလျံ on Aug 13, 2010 in News |7comments
By abma | August 8, 2010
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျနီဗာမြို့အခြေစုိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘာသာရေးနှင့် အသိဥာဏ်မြင့်မားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့က ဗုဒ္ဓဘာသာကို “ကမ္ဘာ့အမွန်မြတ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး” ဘာသာတရားအဖြစ် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အထူးတစ်လည်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဆုကို ကမ္ဘာ့ဘာသာပေါင်းစုံမှ ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀ ကျော်ကရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပို၍၀မ်းမြောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ပါဝင်ရွေးချယ်သည့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အများစုက အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းတွင်အဖွဲ့ခွဲဝင် အနည်းဆုံးဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို မိမိတို့ ဘာသာထက်ကျော်လွန်ပြီး ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့ကြီး၏သုတေသနညွန်ကြားရေးမှူး Jonna Hult က ” ဒီကမ္ဘာ့အမွန်မြတ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ဘာသာတရားဆုကို ဗုဒ္ဓဘာသာက ရရှိတာအံ့သြစရာမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့် ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခြားဘာသာများနဲ့ မတူတာကအဲဒါပါပဲ။ တစ်ခြားဘာသာတွေက အကယ်၍ဘုရားသခင်သာ မှားယွင်းခဲ့ယင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လက်နက်တွေကို အရံသင့် ထားကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ(ဘာသာရေးအတွက်နဲ့) စစ်တိုက်တာကို တွေ့ရဖို့ အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ အစဉ်အလာအလေ့အထနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံတဲ့ တရားကိုသာသူများကို ဟောကြားခဲ့တာပါပဲ” လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Belfast မြို့မှ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး Ted O’Shaunghnessy ကတော့ ကက်သလစ်သာသနာကို မြတ်နိုးကိုကွယ်ပေမယ့် လူသားတွေကိုမေတ္တာဂရုဏာထားရန် ဟောကြားပြီး လူသားတွေကိုပဲ သတ်ဖြတ်ကာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုဆန္ဒ နားလည်ပါတယ်လို့ ပြောကြတာက စိတ်အနှောက်အယှက်အဖြစ်ရဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် မွန်မြတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မဲပေးခဲ့တာပါလို့ အမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်က မွတ်ဆလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် Tal Bin Wassad ကလည်းဒီအဆိုကိုသဘောတူထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမွတ်စလင်အစည်းအရုံးဆိုင်ရာ မဲပေးရေး အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူက “ကျွန်တော်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုနှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ပါ။ သို့သော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ခံစားချက်ထက် ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး အမျက်ဒေါသတွေထွက်ကြ၊ သွေးမြေကျကြရတာတွေကို တွေ့မြင်ခံစားရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ အဲဒါကို သိမြင်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြောရယင်ကျွန်တော့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ချိူ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးနိုင်ငံ ဂျေရုဆလင်မြို့က ဂျူးဘုန်းတော်ကြီး Shmuel Wasserstein ကတော့ “ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်ဘာသာဖြစ်တဲ့ ဂျူဒါအစ်ဇင် ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာမို့ကိုယ် ဒါဟာကမ္ဘာ ပေါ်မှာ အကြီးမြတ်ဆုံး ဘာသာတရားလို့ လည်းထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရယင် ကျွန်တော်ဟာ နေ့စဉ်ဂျူးဘာသာအရ ၀တ်မပြုခင် ၀ိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံ အားထုတ်နေတာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို မဲပေးလိုက်ပါတယ်” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် ထိုဆုကိုလက်ခံရန် ငြင်းဆန်ရကြောင်းမေးမြန်ခဲ့ရာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ဘုန်းတော်ကြီး ဂုရတ္တက “ယခုလိုမိမိတို့ဘာသာကို အသိအမှတ်ပြုချီးမြှင့်သည့်အတွက် ၀မ်းမြောက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ သို့သော် ဒီဆုကို အမြတ်ဆုံး လွတ်မြောက်မှုနိက္ခမဓါတ်၊နိဗ္ဗာနဓါတ် ကြိုးစားအားထုတ်ကာရရှိနိုင်သည့် လူသား အားလုံးကို မိမိတို့ မျှဝေပေးအပ်ပါကြောင်း…” မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ ထိုဆုကို လက်ခံရယူပေးမယ့် သူကိုဆက်လက် ဆက်သွယ်နေဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
လူတွေဟာ ကိုယ်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အမှန်အတိုင်းလက်ခံတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ…..အများအားဖြင့် လူတွေက မိဘကိုိးကွယ်တဲ့ဘာသာကို ကိုယ်ပိုင်ဘာသာအဖြစ်ဆက်ခံကြတာများပါတယ်။
ဒါအယူအဆကို ခုလို အတွေးအခေါ်တွေတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်မှာ လူတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်စမ်းစစ်ပြီိးမှလက်ခံသင့်လာပါပြီ။ ကိုယ်ဝမ်းဝဖို့သူများအသားကို သတ်စားမှတရားမျှတယ်ဆိုတာမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ တမန်တော်ကပဲ ကိုယ့်ဘာသာကောင်းစားဖို့ အနှောင့်အယှက်မှန်သမျှကို သတ်ဖြတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံက အသင့်ကြိုနေတယ်ဆိုတာမျိုးကို စဉ်းစားကြည့်ပါဦိး။
creatorက သတ္တ၀ါအားလုံးကို ဖန်ဆင်းးထားပါတယ်ဆိုရင် ဘာလို့အခွင့်အရေးတွေ ခွန်အားတွေ ဥာဏ်ပညာတွေကြတော့ တူအောင်createလုပ်မပေးခဲ့တာလည်း။
ကို်ယ်ပြုသမျှကံ ကိုယ်သာခံ ကိုယ်လုပ်သမျှရမယ် ကိုယ့်ဝစီကံကိုယ်သာ တာဝန်ယူ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အယူအဆလဲ …..ဘယ်လောက်ရှင်းလဲ။
သတ္တ၀ါအားလုံးကို ကိုယ်နှင့်နှိုင်းကာ ကိုယ်ချင်းစာ၊
အရာရာကိုမေတ္တာနဲ့ကြည့် သူများ ဘာသာတရားကိုမပုတ်ခတ်ရ၊ သူများယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားရုပ်ထုများကိုလည်း မဖျက်စီးနဲ့ ကိုယ်ချင်းကိုယ်သာကိုယ်ချင်းစားကြ၊
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာမှန်သော်လည်း အမှန်တရားနဲ့ကျင့်ကြံဖို့။ မင်္ဂလာ တရားနဲ့အညီနေဖို့ကစလို့၊ စကားကြီး ခြောက်ခွန်းးအထိ အသေးစိတ်သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဘာသာတရား….အယူဝါဒတခုနဲ့ မပြောင်းလဲတဲ့ သစ္စာ လေးပါးကိုရဖို့ အမှန်တရားတခုကိုရဖို့ လေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းလုံးလေ့လာအားထုတ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ ဆရာ………
သံသရာက မလွှတ်သေးသရွေ့ ဒီဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ရသူ ဖြစ်ပါရစေ ဘုရား
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားပြုသူတွေပာာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါပဲ ။
ဆုရတာဝမ်းသာစရာပါ။ ဒါပေမဲ့ သတိပြုသင့်တာက တစ်ခါတရံမှာ ပေးသူက ရသူက ပိုပြီးတော့ ဂုဏ်ရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါလ် တူရကီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တချိန်တုန်းက ခရစ်ယန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ငုံပြီးထပ်ဆောက်ထားတဲ့ မွတ်စလင်ဗလီဝတ်ကျောင်းကို သွားပြီးဝတ်ပြုသလိုပေါ့။ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ လူပုံအလယ်မှာ သူတို့ရ.ဲသဘောထား ကြီးမှုက ရန်သူဟောင်းရဲ.့ ဘုရားဝတ်ကျောင်းမှာ ဒူးထောက်ခဲ.ရတာထက် ပိုပြီးအမြတ်ထွက်သွာတယ် လို့ထင်ပါတယ်။
အကျင့်သီလကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပါ၊ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆီုတာ ကိုယ့်အပေါ်မှာဘဲမူတည်ပါတယ်။ဘယ် တမန်တော်၊ဘယ်တန်ခိုးရှင်မှ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုပြေအောင်၊ကျေအောင်မလုပ်ပေးနှိုင်ပါဘူး။ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ(—ဘာသာမှ) ဗုဒ္ဒဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက ဟာလည်း xxxဘာသာမှကူးပြောင်းလာသူ ပညာတတ်တစ်ယောက်ပါ။
မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ငါ့ဘာသာ ငါ့အယူ ဆိုတဲ့တယူသန်သမားတွေအတွက် လေ့လာစေချင်ပါတယ်။http://dhammaanalysis.multiply.com/
ဒီပို့စ်ကြီးက အရင်တခေါက် mandalay gazette မှာ တင်ပြီးသားပါ။ အဲဒီတုန်းက comment တွေပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ဆင်ခြင်ဥာဏ်သုံးဦးနော်.. ရမ်းတင်တိုင်းမယုံနဲ့ မိမိဘာသာ ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလား။ ဆိုတာယုံကြပါ။
လူတိုင်းက ကိုယ်.ဘာသာကို အလေးထားကြတာ အားလုံးသိပါတယ်….
ဒါကြောင်.စာဖတ်သူတွေထဲ ဘာသာအမျိုး၂ရှိကြတဲ.အထဲ….ဒိလို အစွဲမျိုးတွေကို တင်ချင်၇င်
why did you မနေနိုင်???
Are you communist ??